Barcelona oo Xaqiijisay Xiisaha ay u qabto da’yar ka tirsan kooxda Sevilla Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Barcelona oo Xaqiijisay Xiisaha ay u qabto da’yar ka tirsan kooxda Sevilla
Barcelona oo Xaqiijisay Xiisaha ay u qabto da’yar ka tirsan kooxda Sevilla
Wakiilka kooxda Barcelona Vaya Ballabriga ‘Mani’ ayaa xaqiijiyay xiisaha ay kooxdiisu u qabto ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda Sevilla Bryan Gil . Da’yarka ayaa amaah ku jooga Eibar xilli ciyaareedkan.
Mani ayaa dhoor sano Barcelona wuxuuna ka caawiyay kooxda reer Catalan inay la soo saxiixato dhalinyaro tayo sare leh. Indha indheeyaashu waxay door weyn ka ciyaareen keenista Ansu Fati, Andres Iniesta iyo dhowr kale kooxda.
Sevilla’s Bryan Gil ayaa ka mid ahaa waxyaabihii xilli ciyaareedkaan la helay, Wakiilka Vaya Ballabriga ‘Mani’ ayaa isbarbar dhigay Neymar iyo xidigan Indha indheeyaha ayaa aaminsan in Barcelona ay tahay inay si deg deg ah ula soo saxiixato madaama qandaraaskiisa haatan lagu burburin karo 35 milyan euro.
“Haatan waa ciyaaryahanka ugu fiican Spain waxaanan la barbardhigayaa Neymar. Wuxuu sameyn karaa waxyaabo gaar ah wuxuuna leeyahay tayo badan, maadaama uu ka ciyaari karo daafaca dambeedka dhexe ama garabka bidix. Waa wax cajiib ah. Waxaan la hadlay Roman Qorshayaal isaga ku saabsan oo uu maanka ku hayo Bryan Gil. Haddii la soo saxiixdo qandaraaskiisa waxa lagu burburin karo waa 35m euros, laakiin haddii uu heshiis cusub u saxeexo Sevilla markaa wuxuu heli doonaa qandaraas lagu burburin karo oo qiimihiisu yahay 150m euros. ”
Previous articleKooxaha bixiyeen lacagaha ugu badan horyaalka premier league tobankii sano ee lasoo dhaafay iyo koobabka ay ku guuleysteen.
Next articleBallon d’Or 2021: Kala sareynta 5-ta xidig ee ugu cadcad – Febraayo 2021